ခိုင်ခိုင်စောလွင်: July 2012
သင်ယူသူနှင့် သင်ကြားသူ ကြားက ကွာဟချက်
အသိပညာ အတတ်ပညာ သင်ကြားသူ တွေကို ဆရာ လို့ အသိအမှတ်ပြု ကြပါတယ်။ အဲဒီကမှ ကျောင်းပညာ အတန်းပညာ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာတွေကတော့ အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘဝမှာ အဖေအမေ ပြီးရင် စာသင်ပေးတဲ့ဆရာဟာ ကိုယ်အလေးစားဆုံးနဲ့ အားကိုးမိတာ ဆရာပါ။ အမေ့လက်ထဲကနေ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး သူစိမ်းလက်ထဲကို စိတ်ချလက်ချ ထဲ့ပေးလိုက်တာ ဆရာတွေထံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေက ဘယ်သူခေါ်ခေါ် မလိုက်နဲ့ ၊ ဘယ်သူမှ စိတ်မချလို့ ဘယ်သူစိမ်း လက်မှ မထဲ့ရာက အမေ စိတ်ချလက်ချ ထဲ့လိုက်ပြီး အဲဒီ သူက အမေ့လိုပဲ ကိုယ့်ကို ဆုံးမသွန်သင်ယုံမက စာတွေ ကဗျာတွေပါ သင်ပေးတဲ့အခါ အားကိုးတကြီး ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာကား၊ ပုဗ္ဗာစရိယ မိနှင့်ဖ လို့ဆိုကြတာပါ။ ဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးကတော့ ပြောလို့ကုန်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ယနေ့ ခေတ်မှာတော့ အဲဒီ ဆရာတွေအပေါ်မှာ အထင်မှား အမြင်မှားတာလား၊ အထင်လွဲ အမြင်လွဲတာ တွေလား မသိပါဘူး၊ ပြောကြဆိုကြ တာတွေ နားမဆံ့အောင် ကြားရတဲ့ အခါ အံ့ဩ မိပါတယ်။ လူတိုင်းမဟုတ်သလို၊ ဆရာတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာတော့ စကားပလ္လင်ခံပါရစေ။ ကံကောင်းထောက်မတယ် ပြောရမလား မသိပါဘူး၊ သူငယ်တန်းကနေ ဘွဲ့ရသည်အထိ သူ့ဆီ ကျူရှင်လာတက်ဘို့ ခေါ်တဲ့ ဆရာမျိုးမတွေ့ဘူးသလို၊ ဆရာ၊ဆရာမ သင်တာ နားမလည်ဘူး၊ စာသင်မကောင်းတဲ့ ဆရာ၊ အသင်အပြ မကောင်းတဲ့ဆရာ ဆိုတာတွေ ကျမ ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ သက်တမ်း (၁၇) နှစ်အတွင်း မှာ တခါမှတောင် မတွေ့ဘူးပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်း တစ်လျှောက် မှာလည်း ကျောင်းသားတွေကို အချောင်ခိုပြီး သင်လိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ မျိုး မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ သူရှင်းပြတာကို ကျောင်းသားတွေ နားမလည်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျတတ်တဲ့ ဆရာ/ဆရာမ တစ်ချို့ရှိသလို၊ ဘယ်လောက်ရှင်းပြ ရှင်းပြ ဘယ်လိုမှ သဘောမပေါက်တဲ့ အင်မတန် နားဝေးတဲ့ ကလေးမျိုး ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင်ယူတဲ့သူနဲ့ သင်ကြားသူကြားက ပြဿနာ စတာပါပဲ။
သင်ကြားသူ ဆိုတဲ့ ဆရာတွေ ဘက်ကကြည့်ရင်၊ ကျောင်းဆရာ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် ကျောင်းဆရာ ဖြစ်လာတာလဲ၊ ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ပြည့်ဝစွာနဲ့ ဖြစ်လာတာလား၊ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မရှိလို့ ရတဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်ရာက ဖြစ်လာတာ။ ဒိထက် တက်လမ်းရှိတဲ့ အလုပ်ရရင် ပြောင်းဖို့ ခေတ္တ ယာယီ ဝင်လုပ်တာ၊ အဲဒီလိုဝင်လုပ်ရာက ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာပဲ ဆရာဘဝ မှာသောင်တင် နေတာ။ အဲ..အဲဒီလို ဆရာ/ဆရာမ မျိုးတွေ ရှိသလို၊ ကျောင်းဆရာမှ မလုပ်ရရင် ဘယ်အလုပ်မှ မလုပ်လို၊ ပညာသင်ပေးရင်း ဘဝကို ကျောင်းဆရာဘဝ မှာပဲ ပျော်ပျော်ကြီး မြှုပ်နှံထားလိုတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ မျိုးတွေလည်း အများကြီးပါ။ ကျောင်းဆရာ လုပ်လိုသူတိုင်း ဆရာဖြစ်လာတာ မဟုတ်သလို၊ ဆရာဖြစ်လာသူတိုင်း ကျောင်းဆရာ လုပ်လိုသူများ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒီအခြေအနေတွေကို ကျမတို့ငယ်စဉ်က မကြားခဲ့ရပါဘူး။ ဒီအခြေအနေတွေ ဖြစ်ရတာဟာ ခေတ်ကာလ ခေတ်စနစ်ကြောင့်ပါလို့ ဆိုရင် မှားနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကျမ မူလတန်းပြဆရာမ စတင်လျှောက်စဉ်က အဖြစ်အပျက် ကလေးပါ။ ၁၉၈၈ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၈၉ မှာ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေကတော့ မဖွင့်သေးပါဘူး။ အရေးအခင်းကာလမှာ ကျောင်းသားတွေ ဘက်ကရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဆရာ/ဆရာမ တော်တော်များများ အလုပ်ပြုတ်ကုန်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ တောတွင်းရောက်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာ/ဆရာမ တော်တော် လစ်လပ်ပါတယ်။ အရေးအခင်း အပြီး အလုပ်အကိုင်ရှားပါး နေချိန်မှာ ပထမဆုံး ဝန်ထမ်းခေါ်တာ ကျောင်းဆရာ ရာထူးပါ။ ဘွဲ့ရ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပုပုရွရွ အကုန်လာလျှောက်ကြပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလို လျှောက်ကြ သလဲ ဆိုတော့ အသက်ကန့်သတ်ချက်က အသက်(၄၀) အထိ ပေးထားလို့ပါ။ အရင့်အရင်က မူလတန်းပြဆရာမ ခေါ်ရင် အသက်ကန့်သတ်ချက်က (၂၅)နှစ်ပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာ နားစွင့်တော့မှ ဖြစ်ပုံကို သိရပါတယ်။ မဆလ ခေါ် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီက ရှစ်လေးလုံးကာလမှာ နိဋ္ဌိတံသွားပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီ ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ အကုန် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အလုပ်ပြန်ပေးဘို့ အတွက် ခေါ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကြားတဲ့ တချို့တွေက တို့တော့ ရဖို့မမြင်ဆိုပြီး လျှောက်လွှာပြန်ရုပ်တဲ့သူ ရှိသလို ရေးဖြေ မဖြေတော့တာတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ကျမကတော့ ကျောင်းဆရာမ လုပ်ချင်သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ခါ မအောင်လည်း နောက်ထပ်ဖြေ၊ မရမချင်း ဖြေပြီး ဆရာမဖြစ်တဲ့ အထိ ဖြေဘို့ စိတ်ကူးရှိတာမို့ အတွေ့အကြုံရလည်း ရဆိုပြီး ဝင်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လည်း ပါတီပြုတ်(ထိုစဉ်ကအခေါ်အဝေါ်) တွေ အများသားပင်၊ သူတို့ ကြည့်ရတာလည်း ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ သူတို့ပဲ ရမှာဆိုတဲ့ ပုံစံပါ။ ရေးဖြေမှာ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေ အားလုံး မမှတ်မိပေမယ့် မမေ့နိုင်ဖြစ်ရတဲ့ မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆရာကျင့်ဝတ် ဘယ်နှစ်ပါးရှိသလဲ။ ဖော်ပြပါတဲ့။ မေးခွန်းက ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ မမေ့နိုင်တာက စာမေးပွဲ ဖြေအပြီး ပြန်အထွက်မှာပါ။
“ ဆရာ့ကျင့်ဝတ် ငါးပါးရှိမှန်း သိတယ်။ တခုချင်း မသိလို့ မဖြေခဲ့ဘူး” ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို လက်ညှိုးထိုးပြီး “ အဲဒီ ညီမလေး ဖြေတာတွေ့လို့ ပြပါဆိုတာ မပြဘူးတဲ့”
ကျမလည်း “ ကျောင်းဆရာမ လုပ်မယ့်သူက ဆရာ့ဝတ်တောင်မသိဘဲ လုပ်ချင်လား၊ ဒါ့ကြောင့် မပြောတာလို့ “ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ပါတီပြုတ်တွေ အများအပြား ဆရာ/ဆရာမ တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျမလည်း ဒီတစ်ကြိမ်ဖြေပြီး ဆရာမ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ ဘာသင်တန်းမှ မတက်ရပါပဲ တာဝန်ကျတဲ့ ကျောင်းမှာ တာဝန်ပေးတဲ့ အတန်းကို သင်ကြရပါတယ်။ ယခုလက်ရှိက အဲဒီ ၈၈ နောက်ပိုင်း ဆရာလောကထဲ ရောက်လာတဲ့ သူတွေများတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ကလေးဗဟိုပြုတာတွေ၊ ဆရာဗဟိုပြုတာတွေ ဘာမှမသိပါဘူး၊ ကိုယ့်တုန်းက ဆရာတွေ ဘယ်လိုသင်သလဲ၊ အဲဒီလို ပုံစံနဲ့ပဲ သင်ကြတာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာမှတ်သား၊ စာသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ သင်ကြားမှု ပုံစံကို လေ့လာမှတ်သားပြီး သင်ကြရတာပါ။ စာသင်ခန်းထဲ ဝင်လာရင် စာအုပ် လုံးဝ မကိုင်ပဲ မြေဖြူလေး လက်ကကိုင်ပြီး သင်တဲ့ ဆရာကို အားကျလွန်းလို့ ကိုယ်လဲ ဆရာဖြစ်ရော အဲဒီလို ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ယူပြီး လုပ်တော့တာပါပဲ။ အဲဒါမျိုးက ပွဲမဝင်ခင် အပြင်က ကျင်းပဆိုသလို အတွေ့အကြုံရယ်၊ အလေ့အကျင့်ရယ် အများကြီးလိုပါတယ်။ နောက်စာသင်နည်း ဆိုတာ သင်တန်းဘယ်လောက် တက်တက် လက်တွေ့ ကြုံရတာက ပိုထိရောက်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ကျမ ရှစ်တန်း အရောက်မှာ မမေ့နိုင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံရပါတယ်။ ကျမက ပထဝီဘာသာရပ်ကို လုံးဝ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ မှတ်လို့ နားမလည်နိုင်တဲ့ အတွက် နားမလည်ပဲ အသေကျက်တာ ပင်ပန်းလှပါတယ်။ နားမလည်ပဲ အလွတ်ကျက်လို့လား မသိပါဘူး၊ စာမေးပွဲဖြေရင် မေ့ကုန်ပါတယ်။ အစမေ့ရင် ဘာမှ မရတော့ပါဘူး။ မြေပုံလဲ မဆွဲပါဘူး၊ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေ အမှတ်(၈၀)၊ (၉၀) ရပြီး ပထဝီဆိုရင် (၆၀) တခါမှမကျော်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အမှတ်စာရင်း ပြောလို့ အမှတ်တွေပေါင်းထားရင် ကျမအမှတ်က အဆင့်(၁)ပါ။ ပထဝီ အမှတ်ထွက်လာပြီဆို အားလုံးနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းကနေ ထခါထဲ စောက်ထိုးကျသွားတော့တာပါပဲ။ သူများနဲ့ (၁၅) (၂၀) က အဲဒီမှာ ကွာတော့တာကိုး။ ရှစ်တန်းရောက်တဲ့ နှစ်မှာ ဒီဆရာမနဲ့ ဆုံရတာက ဆရာမ သင်ပေးတဲ့ ပုံစံကြောင့် ပထဝီကို စိတ်ပါဝင်စား လာပြီး ကောင်းကောင်းလည်း နားလည်လာပါတော့တယ်။ မှတ်လည်းမှတ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်တွေလည်း တက်လာပြီး ပထဝီဘာသာရပ် ကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ ဆရာမက အတန်းထဲဝင်ရင် ဘာစာအုပ်မှ မကိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ ခေတ်က ဆရာက မှတ်စု ခေါ်ပေးရတာကိုတောင် မှတ်စု မခေါ်ပါဘူး။ သူရှင်းပြပြီးရင် ဖတ်စာအုပ်ထုတ်စေကာ ဘယ်ကနေ ဘယ်အထိ ဝိုက်ကွင်းခတ်၊ အဲဒီ အပိုဒ်ကျော် ဒီလိုပြောပြီး အဲဒါပြန်ဖတ်။ မှတ်စု မှတ်ချင်ရင် တခေါက်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အိမ်မှာရေး၊ ဒီလိုသင်တာပါ။ မြေပုံဆိုတာ လှဘို့မလို၊ မှန်ရင်ရဘီ ဆိုလို့ ကျမနဲ့ အံကိုက်ပါပဲ။ ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့မြို့၊ ခဲမဖြူ၊ ရေနံ စသဖြင့် ထွက်တဲ့ မြို့တွေကို အသေအလဲ ကျက်ရာက ဘာ့ကြောင့် ဒီနေရာမှာထွက်ရတာ၊ ဒါတွေက ဘယ်လိုအရပ်ဒေသမှာမှ ဖြစ်ထွန်းနိုင်တာ သိလာတော့ အထူးတလည် ကျက်စရာမလိုပဲ မှတ်ရလွယ်သွားလိုက်တာ အခုထိတောင် မမေ့တော့ပါဘူး။ ဆရာမက စာသင်ချိန် အပြည့် စာချည်းသင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးမစရာတွေ အတွေ့အကြုံတွေကိုလဲ ပြောပြတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်က ယောင်္ကျားလေး၊ မိန်းကလေး ပုဆိုး ထမီဝတ်ရင် အောက်မှာ ကြမ်းတိုက်ပြီး တရွတ်ဆွဲပါတယ်။ ဆရာမတူလေးတွေလည်း အဲလို တရွတ်ဆွဲပြီး ဝတ်တတ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ တရွတ်ဆွဲ ဝတ်တော့ အောက်နားတွေ ဂျီးပေလို့ အမေ၊ကြီးတော်တွေက လျှော်တဲ့ အခါ ပင်ပန်းပုံကို သေသေချာချာ ရှင်းပြတာ မဝတ်တော့ကြောင်း ရီစရာတွေနဲ့ ပြောပြပါတယ်။ ဆရာမ မဆူပါပဲ အတန်းထဲက တရွတ်ဆွဲတွေ ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ စာသင်ရင်း ကျောင်းသားတွေ ညီးငွေ့တာ ကိုလည်း သိပါတယ်၊ အဲလိုသိရင် ကလေးတို့ ဒီအခန်းကတော့ အဲဒီလိုပဲ ပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ ခဏ သီးခံ နားထောင်လိုက်လို့ ပြောတဲ့အခါ ပြော နားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပီး နားချင် နားပေးပါတယ်။ အတုယူစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာဆိုတာ တတ်အောင်သင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်ကြားရာမှာ စေတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ သာမက အခြေအနေ အချိန်အခါ လိုက်ပြီး သင်ကြားနည်း စနစ် လဲလိုပါတယ်။ စာအုပ်ထဲက စနစ်ကို တသမတ်ထဲ ကျင့်လို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။
“ ငါဆရာပဲ၊ငါပြောတာနားထောင်၊ ဒီအချိန်မှာ ဒါပြီးမှ ဖြစ်မှာ ၊ နားလည် မလည် ပြီးအောင်သင်မယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသား စိတ်ဝင်စားလား၊ စိတ်မဝင်စားလား၊ မသိ၊ သင်နေခဲ့ပါက သင်ယူသူ ကျောင်းသားနဲ့ အံမကိုက်တော့ပါဘူး။
အချို့ဆရာ/ဆရာမများကတော့ စာသင်ရင် ဖတ်စာအုပ်ကို မျက်နှာမှ မခွာ၊ အတန်းကိုလည်း မကြည့်ပဲ သင်ကြပါတယ်။ ထိုဆရာမျိုးနှင့် ကြုံရပါက ကျောင်းသားတစ်ချို့က တိုးတိုး တိုးတိုး ကြိတ်ပြီး စကားပြောသူကပြော၊ မုန့်ခိုးစားသူက စား လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ စာထဲ စိတ်မရောက်ကြတော့ပေ။ ဗရုတ်ကျသော ကျောင်းသားတချို့ဆိုပါက စာ`ရွက်ကို လိုက်လှန်သယောင်လုပ်ပြီး စာမျက်နှာဂဏန်းများကို စာရွက်လှန်ကြေး ဆော့ကြပါတယ်။ အချို့ဆရာ/ ဆရာမ ကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ အတန်းကို ကျောခိုင်းပြီး တတွတ်တွတ် ရွတ်ပါတယ်။ ခပ်ဆိုးဆိုး ကျောင်းသား များကတော့ အတန်းနောက်မှာ လက်ဝှေ့ပင် ထိုးနေကြပါတော့တယ်။။ဆရာချင်း အတူတူပင် ဖြစ်သော်လည်း သင်နည်း အဖုံဖုံဖြင့် သင်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဟိုး အရင်က ဆရာမများ ကဲ့သို့ စနစ်တကျ သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး ပညာရေး လောကသို့ ရောက်ရှိလာသူများ နည်းပါးခြင်းကြောင့်ပင်။ ခေတ်စနစ် ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ပညာရေးစနစ် အမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ ဆရာအရင်းအမြစ်များကလည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ပင်။
ဆရာ/ဆရာမ လုပ်သက် (၁၀) နှစ်ခန့် အရောက်မှာမှ စနစ်တစ်မျိုး ပြောင်းပြီး ဘာသာရပ်အလိုက် မွမ်းမံ သင်တန်းများ တက်ကြရပြန်ပါတယ်။ သို့သော် သင်နည်းကား ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီ ဖြစ်၍ ဘာသင်တန်း ထပ်တက်တက် ကိုယ်သင်နေသည့် ပုံစံ အတိုင်းပင် ဆက်လက် သင်ကြားမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ငယ်စဉ် ကလေးဘဝက ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ဆရာ/ဆရာမများကတော့ ဆရာဖြစ်သင်တန်း အောင်ပြီးမှ ဆရာဖြစ်လာသူ တွေချည်းပင်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်း( ရန်ကင်း၊ သင်္ကံန်းကျွန်း) ( ထိုစဉ်က အခေါ်)၊ များမှ သင်တန်းဆင်းပြီး၊ တာဝန်ကျရာ ကျောင်းများသို့ ရောက်ရှိ လာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း မဆင်းမီ တန်းပြဆင်းတဲ့ အနေနဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ လုပ်အားပေးရပါသေးတယ်။ အဲဒီ တန်းပြဆင်းရင်း သင်ကြားပုံကိုလည်း စာမေးပွဲ အမှတ်ယူပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် တွေ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ဆရာများ မွေးထုတ်လျက်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အတွက် နောင်နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ စနစ်တကျ သင်ကြားနည်းစနစ်တွေနဲ့ ပညာရေးမြှင့်တင် လာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ စနစ်တကျ၊ နည်းစနစ်မှနမှန်နဲ့ ကျောင်းသား နားလည် လက်ခံအောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ ဆရာအရင်းအမြစ်ပါပဲ။
သင်ယူသူ ကျောင်းသားဆိုတာကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိတာပါပဲ။သင်ယူသူ ကျောင်းသားဆိုတာ များသောအားဖြင့် ဥာဏ်ရည်က အတူတူပါပဲ၊ မှတ်ဥာဏ်အားနည်းတဲ့ ကလေးက ဝီရိယပိုစိုက်ရင် သင်ယူရတာ အခက်အခဲ မရှိလှပါဘူး။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေဟာ များသောအားဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု အပေါ် မူတည်ပြီး ပညာကို သင်ယူကြရပါတယ်။ တချို့က စာကျက်လို့ ပြောမှ စာကို ကျက်သလို၊ တချို့က သူ့အသိစိတ်နဲ့သူ ပြောစရာမလိုပဲ ကျက်မှတ် တတ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သင်ကြားသူဆရာရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ ကလေးတွေက စနစ်တကျ သင်ယူကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကတော့ အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကလေး အိမ်စာ မှန်မှန် လုပ်မလုပ် ၊ အချိန်မှန် ကျောင်းတက်မတက်၊ အချိန်မှန် စာကျက်ဖို့ ဆိုတာတွေက မိဘတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိဘဆရာပူးပေါင်း ကလေးပညာကောင်းလို့ ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် မိဘတချို့ကျပြန်တော့ မိဘဆရာ ပူးပေါင်းပုံက မှားယွင်းနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ မှားယွင်းမှုဟာ ကလေးအပေါ်မှာ သွားပြီး သက်ရောက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာသင်တာ နားမလည်ရင် သူ့ကျူရှင်ဆီ သွားတက်ခိုင်းတာမျိုး၊ အတန်းပိုင်ဆရာထံမှာ ကျူရှင်တက်မှ စာမေးပွဲ အောင်မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးဟာ ကလေးတွေကို သင်ယူလိုမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ ဆရာစာသင်တာကို တချိန်ထဲ တပြိုင်ထဲ နားထောင်တာချင်း အတူတူ အချို့ကလေးက ဒက်ကနဲ သဘောပေါက်ပြီး၊ အချို့က အခေါက်ခေါက်အခါခါမှ သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာ/ဆရာမတော်တော်များများက စာသင်ရင် နှစ်ခေါက်ကတော့ အနည်းဆုံး ရှင်းပြ ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဆရာ/ဆရာမတွေရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင်ကလည်း စာသင်ရာမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စွဲဆောင်စေတတ်ပါတယ်။ ဆရာ/ဆရာမ အတန်းဝင်လာမှာကို မျှော်လင့်စောင့်စား စေနိုင်တဲ့ အထိ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သင်မယ့်ဆရာက ပျင်းပျင်းရိရိ အမူအယာ ရှိနေရင် သင်ယူတဲ့ ကလေးတွေကလည်း လိုက်ပြီး ပျင်းတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားဆိုတာက ဆရာမ စာသင်ဖို့ အတန်းထဲဝင်လာရင် ဆံထုံး ထုံးတာ ၊ ပန်းပန်တာက အစ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အရာရာကို အတုမြင် အတတ်သင်ကြမယ့် အရွယ်ကိုး၊ သဇင်ပန်း မပေါ်တဲ့ရာသီမှာ သဇင်ပန်း ပန်လာရင်လည်း စိတ်ဝင်စားတာပါပဲ။ ဆံထုံးကို တနေ့တမျိုး ပုံစံပြောင်းပြီး ထုံးတတ်တဲ့ ဆရာမဆိုရင် နေ့တိုင်း သူ့ဆံထုံးကို စောင့်ကြည့်ကြတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာမ စာသင်တာကို စိတ်မဝင်စားခင် ဆရာမ အတန်းဝင်လာမှာကို စိတ်ဝင်စားစေတာကလည်း အဲဒီဘာသာရပ် သင်ကြားမယ့်အချိန်ကို သင်ယူဖို့ စိတ်ပါဝင်စားစွာ စောင့်နေမိခြင်းတမျိုးပါပဲ။ ကျမ အလယ်တန်းကျောင်းသူ ဘဝက ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက် ဆိုရင် သူနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေ ကျောင်းရှိရာ မြို့သစ်( ထိုစဉ်က) ကို နေ့စဉ် ဘတ်စ်ကားနဲ့ လာရပါတယ်။ အတန်းထဲ ရောက်ရင် ကားစီးရင်းကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် ပြောပြတတ်ပါတယ်။ ဆရာမက ဘာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်တတ်ပဲ အရာရာကို ခွင့်လွှတ်တဲ့ အမြင်နဲ့ ကြည့်လေ့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ ကိစ္စကို ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ပဲ ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘတ်စ်ကားစီးရင်း ကြုံရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ကျမတို့ အားလုံး နားထောင်ပြီး သဘောကျ ကြပါတယ်။ တခါတလေ ဆရာမက အမူအယာပါလွန်းရင် ကျမတို့ကလေးတွေ အူတက်မတတ် ရယ်ရတာ မှတ်မိပါသေးတယ်။ အဲဒီလို ဆယ်မိနစ်လောက် ပြောဆိုပြီး “ ကဲ စာစသင်ကြရအောင်” လို့ ပြောပြီး သင်ခန်းစာကို သင်တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမတို့ စိတ်တွေဟာ ပေါ့ပါးပြီး စာသင်တာနားထောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး တက်ကြွ နေကြပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေက ဆရာမ အတန်းဝင်လာမယ့် အချိန်ကို မျှော်မိကြပါတယ်။ ကလေးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးစိတ်ပညာတို့၊ သင်ယူမှု သင်ကြားမှု အခြေခံတို့၊ သင်ကြားမှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတို့ ဆိုတာတွေဟာ အရေးပါတာပါ။ သင်ကြားမှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းဆိုတာက ကိုင်တွယ်လို့ရပြီး မြင်တွေ့ရတဲ့ အရာသာမဟုတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင်ကြားသူ ဆရာ/ဆရာမတွေနဲ့ သင်ယူသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ အကြားမှာ ကွာဟချက် ကြီးကြီးမားမား ရှိနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဓိက ကတော့ စနစ်မူမှန်ပြီး နားလည်မှုပုံစံ ထပ်တူကျနေဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းလေ အနာဂတ်ပညာရေး ပုံဖော်မှုတွေ အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစ ကျယ်ပြန့် လာလေသာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 5:55 AM No comments:
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 1:20 AM2comments:
အဆိုတော် မေလှမြိုင် သီဆိုထားတဲ့ အလေးပြုပါသည် သီချင်းကို နားထောင်ရင်းက ဒီသီချင်းတွေ အခုမှကြားဖူးသည်လို့ သမီးကြီးက ပြောတော့ ကျမအတွေးတွေ ဖျတ်ကနဲ စဉ်းစားရသည်။ ဟုတ်တာပေါ့ သမီးက ၁၉၉၁ ခုနှစ်ဖွား၊ ရေတွက်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီနှစ်ပိုင်း၊ ဒီကာလတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်မက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမိုင်းကြောင်းကိုပါ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ကလေးတွေ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်။ ဒါပေမယ့် သိအောင်ပြောရင်တော့ သိကြပေမည်။ ဒါက မိဘတွေနှင့် ဆိုင်လာချေပြီ။ ကိုချိုတူးဇော် status မှာရေးထားတာလေး ဖတ်လိုက်ရသည်။ သူ့အိမ်လာလည်တဲ့ ကလေးကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ပြပီး ဘယ်သူလဲသိလားဆိုတော့ ကလေးက " သိတယ်.. ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လေ" လို့ ဖြေလိုက်တာ ကလေးအမေကို လက်ညှိုးထိုးလို့ ရန်တွေ့တယ်ဆိုတာ သတိရမိပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်ပါသေးရဲ့လို့ အောက်မေ့မိသည်။ ကျမကလေးတွေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို အကုန်သိသည်။ ဒါပေမယ့် အာဇာနည်သီချင်းတွေကို သူတို့ နားမထောင်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရန်တွေ့မိလေသည်။ ဗဒင်သီချင်းများ ခေတ်စားချိန်တွင် ရုံးမှာရထားတဲ့ မူရင်းခွေကနေ ကိုယ့်ကက်ဆက်ခွေလေးထဲ ငါးမိနစ်ပင်မကြာ ကူးပီးဘီ။ သမီးရေရော့ဆိုကာ အိမ်ရောက်တာနဲ့ နားထောင်ဘို့ ပေးဖြစ်သည်။ စောဘွဲ့မှုးသမီး ကဗျာဘွဲ့မှုး သိချင်းစဆိုတော့ ဝလုံးလေးမှဝိုင်းအောင်မရေးနိုင်ခင် ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ မှားတဲ့ဘက်မှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းထင်ပါရဲ့ ၊ အဲဒီသီချင်းလေး ကူးခဲ့ပါအုန်းဆို ချက်ချင်းကူးပေးခဲ့သည်။ အချိန်မရွေး ကူးလို့ရသည်။ အဆိုတော် မာမာအေး သီချင်းများ မလွှင့်ရလို့ ပိတ်ထားတော့ နားထောင်ချင်လို့ဆိုကာ ကူးယူထားမိသည်။ အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြုသီချင်းများသည်လည်း မလွှင့်ရဆိုသည့် စာရင်းတွင်ပါသည်။ ဒါတွေကို ကူးယူဖို့၊ ကလေးတွေ နားထောင်ခိုင်းဖို့ မေ့လျော့နေခဲ့သည်။ ကိုချိုတူးဇော် သိလျှင် ကျမကိုလည်း လက်ညှိုးထိုးပီး ရန်တွေ့လေမည်လားမသိ။ ယခု အင်တာနက်ခေတ်တွင်တော့ အာဇာနည်နေ့သီချင်းများသည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အချိန်မရွေး နားထောင်နိုင်လေဘီ။ သတိတရဖြင့် သမီးကို ပို့ပေးလိုက်သည်။ ဒါကိုနားထောင်ရင်း သမီးက အမေကို ပြန်အားပေးသည်။ " ဟုတ်တာပေါ့ အမေရယ်. သမီးတသက်ပေါ့ သမီးငယ်ငယ်ကထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖမ်းခံရလိုက် ပြန်လွတ်လိုက်နဲ့ အဖမ်းခံထားရပီး မနေ့တနေ့ကမှ လွတ်တာလေ" တဲ့။ ဒါတောင် သမီးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ သမီးက အသိဆုံး။ တချို့ဆို ၈၈ အကြောင်းတွေ မသိကြဘူး။ သမီးက အမေတို့ ပြောပြောပြနေလို့ သိတာလေ ဆိုတော့ မှ တော်သေးရဲ့လို့ ဟင်း.. ချရသည်။
နောက်တစ်ပုဒ်ဖွင့်ပါအုန်းဆိုပီး ဆက်ဖွင့်တော့ " ရာဇဝင်အထုပ္ပတ္တိလဲ ရှိရမယ်.. မော်ကွန်းလဲထိုးလောက်တယ် မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ် " သားအမိနှစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်ထဲ အသံထွက်သွားသည်။ ထီသည်.. ထီသည်။ မှန်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ် ခြောက်နှစ်ဝန်းကျင်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ကိုင်၍ လမ်းလျှောက်လို့မရ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ရင်ထိုးတပ်၍မရ။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ အထိမ်းအမှတ်လုပ်၍မရ။ မြန်မာ့အသံမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းများ မလွှင့်ရ၊ သီချင်းများမလွှင့်ရ။ အရာအားလုံး ပိတ်ပင်ထားသည့် အချိန်တွင် အနှီထီသည်လေးသည် အာဇာနည်နေ့သီချင်းများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသီချင်းများ ဖွင့်ပီး လက်တွန်းလှည်းလေးဖြင့် ထီရောင်းသည်။ သူလာပီဆို စမ်းချောင်းရပ်ကွက်ရှိ လူတိုင်း နီးပါးထွက်ကြည့်ကြသည်။ သီချင်းကို လိုက်ဆိုကြသည်။ ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ဘေးရန်ကာဆီးမည်၊ လူမွဲတွေလည်း မနှေး ခေတ်မီ သူဌေး ဖြစ်တော့မည်... ဆိုသည့် နဂါးနီသီချင်း ဖွင့်သည့် ထီလက်တွန်းလှည်းများ။ စာဥရေ ငါအရောက်ပြန်ခဲ့မယ်... ဖွင့်သည့် ထီသည်များ၊ ဂုဏ်..ဂုဏ်.. ဂုဏ် .. ဂုဏ်ဆိုတာ ငွေကိုခေါ်တယ်.... ငွေရှိရင်လုပ်သမျှတင့်တယ်.. ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေ .အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်ကြသည့် ထီလှည်းကလေးများ အကြားတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂုဏ်ပြုသီချင်း၊ အာဇာနည်သီချင်းများ ဖွင့်သည့် ထီသည်ကလေးကို စိတ်ဝင်စားမိကြသည်။ သူလာမှ ကလေးတွေ ဒီသီချင်းကို ကြားကြရသည်။ မိဘတွေ လူကြီးသူမတွေက ပြောပြရသည်။ ထီသည်ကလေးကို အံ့သြလေးစားစွာ ကြည့်ကြသည်။ အချို့က စကားစမြည် ထွက်ပြောကြသည်။ သူ့ဆီမှာထီထိုးကြသည်။ ကျမရဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်က တရက်တွင် ထီထိုးအုန်းမှဆိုရာ ကျမအဒေါ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ထီသည်လေးမှာ ထိုးပါ ။ သူလာတာ စောင့်ပီးထိုးပါ ဟု ဆိုလေသည်။ ဦးလေးက သင်္ဘောလိုက်ရာမှ ပြန်အနားဆိုတော့ မသိသေး။ နောက်ပိုင်း လစဉ်ထီထိုးရင် ဒီကောင်လေးလာမှ ထိုးသည်။ သမီးက ပြောသည်။ မေ့နေလို့ပါ။ အရင်ကတည်းက ဒီထီသည်လေး ဖွင့်ဖွင့်နေလို့ နားထောင်ရပါတယ်တဲ့။ တဆက်ထဲ သတိရလိုက်မိတာရှိသေးသည်။ ကလေးတွေ ကျောင်းက သွေးအမျိုးအစားစစ်ခိုင်းတော့ ကျမတို့ လမ်းနဲ့ကပ်ရက် သရက်တောလမ်းထဲက ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ရှိနေတုန်း အဲဒီ ထီသည်လေးရောက်လာတော့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှုးက သွေးဖောက်နေရင်း ခနလေးနော်၊ ဒီသီချင်းလေး ဆုံးအောင်လိုက်ဆိုချင်လို့ဆိုကာ လိုက်ဆိုတာကို သတိရမိတော့သည်။ အဲဒီ ဓါတ်ခွဲခန်းမှုးကပဲ ကလေးတိှု့ဒါဘယ်သူ့အကြောင်းဆိုတာလဲ သိတယ်နော် ဆိုပီး ပြောပြတာကို လည်းသတိရမိသေးသည်။ ကျမဘက်လှဲ့ပီး ကလေးတွေကို သိအောင်ပြောပြနော်။ အခု ကလေးတွေ မသိအောင် သမိုင်းကို ဖျောက်နေ မြှုပ်နေကြတာ လို့လည်းပြောသေးသည်။ နောင်လာနောင်သားတွေကို သမိုင်းအမှန်သိအောင် ပြောဖို့ ရေးဖို့က လက်ရှိ လူသားတို့ရဲ့ တာဝန်ပဲဟု ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကလေးတွေ သိမှ လက်ဆင့်ကမ်းရင်း သမိုင်းအမှန်ကို သိအောင်လုပ်ကြရမည်။ ယခုအချိန်တွင် တချိန်က နားမထောင်ခဲ့ရ မကြားခဲ့ရသည့် အာဇာနည်သီချင်းများ အခုတော့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ် လွင့်ပျံ့နေချေဘီ။ ယနေ့ လူငယ်များကံကောင်းလေစွ။ သမီးကိုလဲ သမီးတို့အများကြီးကံကောင်းသည်လို့ ပြောဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပီးလဲ ကံကောင်းခြင်းများစွာ ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 12:57 AM No comments:
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 11:00 PM No comments:
အမိရဲ့ ရင်ခွင်( ကောင်းကင် နိုင်ငံပြုအနုပညာမဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်.)
ဇာတ်လမ်းမဟုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်း Kaungkin Magazine မှယူပါသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 4:53 AM No comments:
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 5:40 AM No comments: